Orinasa mite ranomandry China sy mpanamboatra | Huanyi
Tonga lafatra hanamaivanana ny fanaintainan'ny tanana. Azo ampiasaina amin'ny fitsaboana simika ihany koa.
Amin'izay dia mila fonon-tànana maromaro ny mpivarotra, ny orinasanay dia afaka manamboatra ny setroka na mofona ranomandry fitsaboana mangatsiaka hafa ho anao, ny kitapo misy tady, boaty miloko, boaty fandefasana mailaka, kitapo hidy zipper, sns.
Ho an'ny sary famantarana eo amin'ny mite ranomandry, azonao atao ny mampiasa ny fanjairana fanjairana na ny fanontana silkscreen, azonay atrikasa ampiasaina ho anao.
Ny fitaovantsika rehetra, HDPE, PVC, TPU, Nylon ary ny Gel, dia tsy misy poizina. Manana tatitra TRA, MSDS, REACH, SGS ary CE, FDA, orinasa miaraka amin'ny kaonty BSCI izahay.
Ny fonon-tànana tsirairay dia misy gel mahery mahery (14 oz / 400 grama) ho an'ny fahombiazana lava kokoa, karazan-gel vaovao io dia mety maharitra 30 minitra ka hatramin'ny adiny iray.
Nylon matevina matevina nopetahany sary miendrika laminated film ivelany izay tsy mora mivoaka.
Ny haben'ny fonosana ranomandry dia 30x20cm (12x8 ").
Hatao hateloana mandritra ny adiny 2 ny akanjo ary anaovy mitafy ny tananao mba hanamaivanana ny fanaintainana eo noho eo.
Miovaova ny fonosana amin'ny ranomandry rehefa mivaingana ary ny fonosana ranomandry anaty dia manampy amin'ny fanerena hanafaka ny tanana sy ny hatotan-tanana.
Ny orinasanay dia afaka manokatra ny maodely vaovao raha te hanao fonon-tànana mangatsiaka ho an'ny marary chemo ianao, tsy olana izany fa hitazona ny teny rehetra amin'ny hevitrao sy ny hevitrao rehetra izahay.
Mifandraisa fotsiny mba hilazana aminay ny hevitrao, avelao izy ireo hanjary tena marina faran'izay haingana, ny orinasa dia hamela anao ho afaka amin'ny tranom-borona.
1.Afaka manome santionany maimaimpoana ve ianao?
eny 1-3 santionany maimaimpoana maimaim-poana ho anao raha entina hanangonanaed. Raha mila manaingo ny sary famantarana na ny endrikao ianao, dia mila miady hevitra momba ny sarany santionany arakaraka ny fanontana na ny vidin'ny maodely.
Amin'ny ankapobeny dia fandoavam-bola mialoha 30% aorian'ny baiko nohamafisin'ny T / T. Azontsika atao ny manaiky ny L / C arakaraka ny hamaroan'ny filaminana.
Amin'ny ankapobeny MOQ matetika dia mpivady 1000 na 2000. Raha mila manana lamba sy kofehy fitehirizana izahay dia afaka mifampiraharaha miankina amin'ny toe-javatra hanomezana fanohanana tsara indrindra ho an'ny mpanjifa hitsapana ny tsena.
Previous: Sock Therapy Mangatsiaka
Manaraka: Sarontava maso
fonon-tànana tsy misy rantsantanana
Fonon-tanana Gel hihena
Saron-tànana mangatsiaka ho an'ny Chemo
Sarin-tànana mangatsiaka ho an'ny tanana